Vaovao - Antony maro no mametra ny fivoaran'ny indostria simika arintany ankehitriny ao Shina
Amin'izao fotoana izao, ny valanaretina pnemonia satro-boninahitra vaovao dia misy fiatraikany lehibe amin'ny filaminan'ny harinkarena eran-tany sy ny hetsika ara-toekarena, ny fiovana lalina eo amin'ny geopolitika, ary ny fitomboan'ny tsindry amin'ny fiarovana ny angovo. Ny fampiroboroboana ny indostrian'ny simika arintany ankehitriny ao amin'ny fireneko dia manan-danja stratejika.
Vao tsy ela akory izay, Xie Kechang, lefitra lefitry ny Akademia Shinoa misahana ny injeniera ary talen'ny Laboratoara lehibe momba ny siansa arintany sy ny haitao ao amin'ny Minisiteran'ny Fanabeazana ao amin'ny Oniversiten'i Teknolojia Taiyuan, dia nanoratra lahatsoratra iray fa ny indostrian'ny simika maoderina dia ampahany lehibe amin'ny rafitra angovo, tsy maintsy "hampiroborobo ny famokarana angovo sy ny revolisiona amin'ny fanjifana ary hanangana rafitra angovo misy karbaona malemy, azo antoka ary mahomby" no torolàlana ankapobeny, ary ny fepetra takiana amin'ny "karbaona, karbaona ambany, azo antoka ary mahomby" no tena takiana ho an'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny simika arina maoderina mandritra ny “Drafitra Dimy faha-14”. Ny iraka “antoka enina” dia mitaky rafitra rafitra angovo matanjaka hiantoka ny famerenana amin'ny laoniny ny famokarana sy ny filaminam-piainana ary ny famerenana amin'ny laoniny ny harinkarenan'i Shina.
Ny fametrahana stratejika ny indostrian'ny simika arina ao amin'ny fireneko dia tsy mazava
Xie Kechang dia nampahafantatra fa taorian'ny fandrosoana nandritra ny taona maro, ny indostrian'ny simika arina maoderina an'ny fireneko dia nanao fandrosoana lehibe. Voalohany, ny ambaratonga ankapobeny dia eo alohan'izao tontolo izao, faharoa, ny haavon'ny fampisehoana na ny famokarana dia nohatsaraina hatrany, ary fahatelo, ampahany lehibe amin'ny haitao no eo amin'ny sehatra mandroso na mitarika iraisam-pirenena. Na izany aza, mbola misy ihany ny antony mametra amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny simika arintany ankehitriny ao amin'ny fireneko.
Ny fametrahana stratejika ny fampandrosoana indostrialy dia tsy mazava. Ny arintany no tena herin'ny fahaleovan-tenan'i Shina. Ny fiaraha-monina dia tsy manana fahatsiarovan-tena momba ny indostrian'ny simika arina maoderina sy ny indostria simika avo lenta izay mety hadio sy mahomby, ary manolo ny indostrian'ny petrochemical, ary avy eo dia miseho ny "de-coalisation" sy ny "famolavolana simika fofona", izay mahatonga ny indostrian'ny simika arintany ao Shina apetraka stratejika Tsy mazava sy mazava izany, izay nahatonga ny fanovana politika ary ny fahatsapana fa mitaingina «roller coaster» ny orinasa.
Ny tsy fahampiana intrinsika dia misy fiantraikany amin'ny haavon'ny fifaninanana indostrialy. Ny indostrian'ny simika arintany dia manana fanjifana angovo ambany sy fahombiazan'ny fiovam-po, ary ny olana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ateraky ny "fako telo", indrindra ny rano maloto simika, dia miavaka; noho ny fiovan'ny hydrogène ilaina (fanovana) amin'ny teknolojia simika mavo maoderina, avo ny fanjifana rano ary ny famoahana gazy karbonika; Noho ny hamaroan'ny vokatra voalohany, ny tsy fahampian'ny fivoarana ny vokatra voadio, miavaka, ary manokana, ny tombony azo avy amin'ny indostria dia tsy miharihary, ary ny fifaninanana dia tsy matanjaka; noho ny banga amin'ny fampidirana teknolojia sy ny fitantanana ny famokarana, lafo ny vidin'ny vokatra, ary mihatsara hatrany ny fahombiazana amin'ny ankapobeny.
Ny tontolo ivelany dia mametra ny fampandrosoana indostrialy. Ny vidin-tsolika sy ny famatsiana, ny fahaizan'ny vokatra ary ny tsena, ny fizarana harena ary ny hetra, ny famatsiam-bola ary ny fiverenana, ny fahaizan'ny tontolo iainana sy ny fampiasana rano, ny entona ary ny fihenan'ny famoahana entona dia anton-javatra ivelany misy fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny simika arina ao amin'ny fireneko. Ny singa tokana na voafintina amin'ny vanim-potoana sasany sy ny faritra sasany dia tsy namepetra fatratra ny fampandrosoana ara-pahasalamana ny indostrian'ny simika arina, fa nampihena be koa ny fahafaha-miady amin'ny toekarena miorina amin'ny indostria.
Tokony hanatsara ny fahombiazan'ny toekarena sy ny fahaiza-manao manohitra ny risika
Ny fiarovana angovo dia olana ankapobeny sy stratejika mifandraika amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy an'i Shina. Manoloana ny tontolon'ny fampandrosoana an-trano sy iraisam-pirenena sarotra, ny fampandrosoana angovo madio any Shina dia mitaky fampivoarana mavitrika ny teknolojia fanesorana ny fandotoana maloto be, ny teknolojia fanaraha-maso mifangaro maro mandoto, ary ny fitsaboana rano maloto. Teknolojia famokarana Zero sy teknolojia fampiasana "fako telo", miankina amin'ny tetik'asa fampisehoana hahatratrarana ny indostria haingana araka izay azo atao, ary miaraka amin'izay koa, mifototra amin'ny tontolo iainana, tontolo iainana ny rano ary ny fahaiza-manao tontolo iainana, apetraky ny siansa ara-tsiansa ny indostria simika angovo. Etsy ankilany, ilaina ny fametrahana sy fanatsarana ny fenitry ny famokarana angovo miorina amin'ny arintany ary ny fiarovana ny tontolo iainana mifandraika amin'izany, ny fanatsarana ny rafitra fitantanana ny famokarana madio ny fankatoavana ny tetikasa, ny fanaraha-maso ny fizotrany feno ary ny fanombanana ny asa, manazava ny andraikitry ny fanaraha-maso, mamorona rafi-pitantanana, ary mitarika sy mifehy ny angovo miorina amin'ny arintany, fampandrosoana madio ny indostrian'ny simika.
Xie Kechang dia nanolotra soso-kevitra fa amin'ny lafiny fampandrosoana karbaona ambany dia ilaina ny manazava ny zava-bitan'ny indostrian'ny angovo miorina amin'ny arintany ary tsy vitany amin'ny fihenan'ny karbaona. Amin'ny lafiny iray, ilaina ny fampiasana feno ny tombony azo avy amin'ny vokatra CO miorin-tsaina avo lenta amin'ny fizotran'ny indostria simika angovo miorina amin'ny arintany ary mitrandraka am-pahavitrihana ny teknolojia CCUS. Fampielezana farany ny CCS mahomby be ary fikarohana farany sy fampandrosoana ny teknolojia CCUS toy ny tondra-drano CO sy CO-to-olefins hanitarana ny fampiasana ireo loharano CO; Etsy ankilany, tsy azo atao ny "manipy ny totozy" ary tsy miraharaha ireo toetran'ny fizotran'ny indostrian'ny gazy mahery vaika mifototra amin'ny arintany, ary manakana ny fivoaran'ny siansa amin'ny indostrian'ny angovo mifototra amin'ny arintany dia mitaky teknolojia manakorontana amin'ny alàlan'ny tavoahangy fampihenana ny emission amin'ny loharano sy ny fitsitsiana angovo ary ny fanatsarana ny fahombiazana, ary hampihena ny toetran'ny karbaona ambony amin'ny indostria simika angovo miorina amin'ny arintany.
Mikasika ny fampandrosoana azo antoka, ny governemanta dia tokony hanazava ny maha-stratejika sy ny fametrahana indostria ny akora simika avy amin'ny arintany ho toy ny “vato vato” ho fiarovana ny angovo eto amin'ny fireneko, ary handray am-pahatsorana ny fampandrosoana sy ny fampiasana arintany madio sy mahomby arak'asa lahasa voalohany amin'ny fanovana angovo sy ny fampandrosoana. Mandritra izany fotoana izany dia ilaina ny mitarika ny famolavolana ny politika mifehy ny angovo miorina amin'ny arintany ary ny fampandrosoana ny simika, mitarika fanavaozana ara-teknolojika manakorontana, ary hampiroborobo am-pilaminana ireo indostria angovo sy simika miorina amin'ny arintany mba hahatratrarana tsikelikely ny fampiroboroboana, ny varotra antonony ary ny fananganana indostrialy feno; mamolavola politika ara-toekarena sy ara-bola azo antoka hanatsarana ny fampiharana ny toekarena sy ny fifaninanana eo amin'ny orinasa, mamorona ambaratongam-pahefana mahasolo solika sy gazy ary mamorona tontolo ivelany tsara ho an'ny fampandrosoana ny indostrian'ny simika arintany ankehitriny.
Raha ny fivoaran'ny fahombiazana avo lenta dia ilaina ny fanatanterahana am-pahavitrihana ny fikarohana sy ny fampiharana indostrialy ny teknolojia simika angovo miorina amin'ny arintany arak'asa toy ny synthesis mivantana an'ny olefins / aromatika, pyrolysis arina ary ny fampidirana gasification, ary mahatsapa fahombiazana amin'ny angovo fampihenana sy fihenam-bidy; mampiroborobo fatratra ny indostria simika angovo miorina amin'ny arintany ary ny fampiroboroboana ny herinaratra sy indostria hafa, fanitarana ny rojom-pandraharahana, famokarana akora simika avo lenta, toetra amam-pahaizana ary avo lenta ary manatsara ny fahombiazan'ny toekarena, fanoherana risika ary fifaninanana; fanamafisana ny fitantanana ny herijika mitahiry angovo, mifantoka amin'ny fampiroboroboana andianà teknolojia fitsitsiana angovo toy ny teknolojia fampiasana angovo hafanana ambany, Teknolojia fitsitsiana arina ary fitahirizana rano, fanatsarana ny teknolojia fanodinana ary fanatsarana ny fahombiazan'ny fampiasana angovo. (Meng Fanjun)
Famindrana avy amin'ny: China Industry News
Amin'izao fotoana izao, ny valanaretina pnemonia satro-boninahitra vaovao dia misy fiatraikany lehibe amin'ny filaminan'ny harinkarena eran-tany sy ny hetsika ara-toekarena, ny fiovana lalina eo amin'ny geopolitika, ary ny fitomboan'ny tsindry amin'ny fiarovana ny angovo. Ny fampandrosoana ny maody ...